"Bilisoomne" moo "hin bilisoomnee":Namni adeemsa isaa karoorfatee lafaa ka'e tokko, karoorri isaa gaafa galma ga'u qofa gammachuun isaa guutuu ta'a, bu'aa xiqqoon mirqaanee hojii isaa addaan hin kutu, Kichuu
HomeAfaan OromooNews“Bilisoomne” moo “hin bilisoomnee”:Namni adeemsa isaa karoorfatee lafaa ka’e tokko, karoorri isaa gaafa galma ga’u qofa gammachuun isaa guutuu ta’a, bu’aa xiqqoon mirqaanee hojii isaa addaan hin kutu,
“Bilisoomne” moo “hin bilisoomnee”:Namni adeemsa isaa karoorfatee lafaa ka’e tokko, karoorri isaa gaafa galma ga’u qofa gammachuun isaa guutuu ta’a, bu’aa xiqqoon mirqaanee hojii isaa addaan hin kutu,
Haacaalun As Qabaaf Achi Qabaa Hin Barbaadu. Haacceen Qabeenya Uummata Oromoo hundaati.
Maqaa Haacaalun Nagadu dhaabaa.
He is real son of People
Namni adeemsa isaa karoorfatee lafaa ka’e tokko, karoorri isaa gaafa galma ga’u qofa gammachuun isaa guutuu ta’a, bu’aa xiqqoon mirqaanee hojii isaa addaan hin kutu, bu’aan xiqqoo har’a argate humna ta’uufii mala malee adeemsa isaa kan addaan kutuu ta’uu hin danda’u. Bor galma isaas ni ga’a.
Haa ta’u malee yeroo baayyee warri karoora malee adeeman galma itti deeman sababa hin beekneef waan har’a argame isa kaleessaan madaalsisuun itti mirqaanu, galmii isaanis bakka har’a jiran itti fakkaata, mirqaanni isaanii kun heddummatee adeemsa isaanii addaan kutuu danda’a. Yeroo adeemsa isaanii addaan kutanitti immoo bor bakka kaleessa turan gaditti kufanii argamu.
Yaasoo Kabbabaa Hordofaa maal jedheen?
Dubbiin Haaluu dubbii abbaltii laachuti malee dubbii abbaltii fudhatuutii miti. Hacaaluun waan jechuufi waan godhu mara kaayyoofi faayidaa Oromootin gamatti hingodhu.
Dhugaa dubbachuuf Hacaaluun ofumaafuu “Ciigoodha” waan jedhu keessatti tuqee ilaalet, tuqee argisiisee galaana maddisiisee, kanniisa gaaguraa namatti gadhiisa.
Koonsartii Afran Qalloo irratti kaleessa “Bilisoomnerraamii!?” Jedheet keessi Sabaa maal akka yaadaa jiru, hoo’afi dambalii labatichaa safaree kute. Haqni kun dhokatuu hin qabu.
Haacaaluun waan dubbatuun eessaa garamitti akka deemu, waan keessa kuteefi amma itti jiru dhiheenyan warri quba qabu sirriin beeku.
Haacaaluun waan Tokkummaarraa, gara WAA’EE KEENYAA, MAALIN JIRAARRAA GARA JIRRAAtti, achiin ammoo BOOLEE JIRRATTI imalli inni godhe seenaa saba kanaa akka ofilaaletti kaaya.
Mucaan qaaliin kun, gaafa hundumaa qarrinfaa jaboo lama gedduutti alalshamuun nuuf gaarii miti.
Hubadhaa, gaafa rakkoo keenyaa ijaaf ijatti
…nurraa dhoowwaa yaa Lammaa, yaa Abiyyi gaafa jedhu warri mootummaa erga ABOtiin kana godha jedhaniinii hedduu duula itti bahan. Har’ammoo gaafa ‘…bilisoomnemii? Jedhu erga ODP ti jechuun yoo sukkuumame maayyii garam adeemamaa jira.
Namiyyoo keenya yoo tolche yaa faarsinu, balleessu yaa gorsinu malee abaarsi nuuf hin meelchu.
Dhugaa dubbachuuf, inni waan yaadefi waan karoorse xumureet waltajjiirraa bu’a.
Ani ammoo akka kiyyaatti kaleessa yeroo,
“…bilisoomnemii!?” Jedhu dambalii madaallii yaada keenyaa safaree, safarsiisee bu’e. Haadhaa ani kan dubbii ta’a jedhee eegee ture,
” …sifudheen Harargee lixaa,
Sifudheen Gujii koo lixaa,
Sifudheen Wallaggaa lixaa” jedhee yoo bu’u kan sila sirba isaa JIRRAA keessatti magaalota Oromiyaa hedduu maqaa dhahaa ture san sadi’iin dhiisuun isaa dhimma jabduu ture. Maalif saditti dhiise? Maalif ammoo bakkeewwan kana keessaa folate? Kan jedhutu haajaa jabduu nuu dhiise.
Dubbiin isaa ciigodha. Mee hubadhaa!
Haacaaluu eeggachuufi kunuunsun dhimma Oromoo guutuu kunuunsudha. Namni kun kophaa isaatti hawaasa bal’aa, mootiifi ajajaadha. Waanin kana jedheefin qaba. Waan inni jedhu hordofeet wantoonni kallattii xiyyeeffannaa argata.
Ilaalaa, inni “bilisoomnerraamii!?” Jedhe malee dhaabbadhaa bilisoomnee jirraa hin jenne.Hawaasa jalaa qabe muraasatu “Eeyyee” jedhe. Waltajjii irratti lakkii hinnbilisoomnee jedhee akka hawaasa saniin mormu ammoo hin eegnu. Dhugaa dubbachuuf inni waan baruu barbaade baree bu’eera.
Kanaaf dubbiin nu biratti haftee isa dhiisaa!
Nuti Waanuma Bilisoomne Tokkoyyuu hin qabnu!
1. Isoo Ijoolleen Kaleessa mana hidhaa hiikaman hidhaatti deebi’aa jiranii
2. Isoo Afaan Oromoo Afaan Federaalaa hin ta’iin
3. Isoo Nadhii Gammadaa, Dabbasaa Guyyoo fi kkf eessa akka jiran hin baramiin
4. Isoo Daangaan Oromiyaa hin kabajamiin
5. Isoo Finfinneen, Dirree Dhawaan Keenya ta’uun isaanii hin mirkanaa’iin
6. Isoo Yakkamtoonni OPDO Abiyyii Kaasee hanga Kaadiree ganda keessaa Seeratti hin dhihaatiin
7. Isoo Alaabaa Keenyaan hin buliin
8. Isoo Nama nu filanne Aangootti hin bahiin
9. Isoo Oromoo irraa ajjeechaan hin dhaabatiin
10. Isoo Abbaan Biyyummaa hin mirkanaa’iin fi kkf isoo hin argamiin Bilisoomneerra jennee yoo Saba burjaajessinu Seenaan gaaf tokko nu gaafatti!
Bilisummaa warra OPDOn aangoo qabachuun lakkooftaan nurraa dhaabadhaa. Ijoolleen 4000 ol kan dhumaniif qabsoo akka Itti qoosnuuf Miti.
~by Rabbummaa Getachoo Warra Bilii.
“Bilisoomne” moo “hin bilisoomnee” kana maalumaaf yeroo kanatti mata duree gochuu barbaaddan dhiiroo? Gaaffiin kun yoo ka’e deebiin isaa nu qoqqooda malee wal nun taasisu. Gariin keenya ”bilisoomneerra, garuu….” jennee deebifna ta’a. Gariin ammoo ”hin bilisoomne, garuu…” jechuu malla. Kanneen duudaadhumatti ”bilisoomneerra” yookiin ”hin bilisoomne” jedhanis argaa jirra. Maaloo yoo xiqqaate warri maqaa gurguddaa qabdan mata duree kana yeroo kanatti ajandaa hin godhinaa. Gaaffii kanaaf deebii dhugaa kan kennuu danda’u nu warra biyya ambaa jiru yookiin warra qabsoo ummataatiin ala irraa gale caalaa warra warraaqsicha keessatti gubatee keessa bahee guyyaa har’aa kana arge dha natti fakkaata. “Isintu beeka, warra gubatee arge” jedhe wallisaan hangaftichi.
Maqaa Amantiin lafa weeraruun dhaabachuu qaba!